“Qamaar ma ahan inaan ka soo tagay Leicester City kuna soo biiray Chelsea.”. Kante – Gool FM
(London) 04 Agoosto 2016. N’Golo Kante ayaa diiday in go’aankii uu uga soo tagay Leicester City uguna soo biiray Chelsea ay wiiqineyso riyadiisa inuu mar uun ka ciyaaro Champions League.
Blues ayaa sanadkan seegtay Champions League kaddib xilli ciyaareed dansanaa, halka Leicester City ay u soo baxday Champions League kaddib xilli ciyaareed aan innaba caadi ahayn ay ku qaaday Premier League.
Haseyeeshee, Kante ayaa kalsooni ku qaba in Blues ay goor dhow ku soo laaban doonto musharixiinta ugu fiican.
“Ma ahan Qamaar, ani ahaanteyda tani waa talaabo cusub. Inaan joogo Leicester City aana ciyaaro Champions League waxay ahaan lahayd talaabo fiican, laakiin inaan ku soo biiro Chelsea sidoo kale waa talaabo fiican,” 25-jirka ayaa sidaa u sheegay Daily Mirror.
“Dabcan, weligeey kama ciyaarin Champions League. Laakiin qofkasta wuu ogyahay in Chelsea ay tahay koox wayn waxaana rajeynayaa inaan CL ka ciyaari doono sanadka soo socda.
“Inaan ka ciyaaro Champions League riyo wayn ayay ii tahay. Marka aad tahay ciyaaryahan aadna hesho fursad aad uga ciyaaarto waa wax fiican.
“Laakiin sida aan iri, waxaan rajeynayaa inaan ka ciyaaro CL xilli ciyaareedka soo socda.”.
SERIE A: Shaxaha & safafka ay fasalkan lasoo shirtegi doonaan kooxaha waawayn ee Talyaaniga